Yintoni udidi lokuqala nolwesibini lwesifo seswekile? -
Omnye wemibuzo esiyibuzwa kakhulu kwi Diabetic South Africans ingendidi ezahlukeneyo zesifo seswekile. Kukho iindidi ezintathu zesifo seswekile: Udidi lokuqala,udidi lwesibini , nesifo seswekile sokukhulelwa. Nalu ulwazi olufutshane ngomahluko phakathi kwezindidi. Sicela usazizse ukuba uneminye imibuzo apha kwizimvo ngezantsi!
Udidi lokuqala lwesifo seswekile
Udidi lokuqala lwesifo seswekile kuxa Injeke wakho uyeka ukuvelisa iihomoni ezifanelekileyo zokufunxa iswekile yegazi. Ukufunyaniswa nesifo seswekile isoloko isisaquphe kwaye iyamangalisa, ingakumbi esibhedlele. Ukuba uyazikhathalela, kusenokwenzeka ukuba ulahlule udidi lokuqala . Bonke abaphila nodidi lokuqala lwesifo seswekile kumele ukuba bahlabe inaliti ngexesha lokutya ( naphambi kokuba bayekulala) Abanye abanodidi lokuqala basebenzisa impompo endaweni yenaliti.
Udidi lokuqala lwesifo seswekile lulona luxhaphakileyo ebantwaneni, ulutsha okanye abangaphantsi kweminyaka engama-30, kodwa liyanda inani labantu abadala bafunyaniswa benesifo seswekile. Akubangelwa kukutya ukutya ukungekho mpilweni, okanye ukutya ukutya okuneswekile eninzi , okanye ukutyeba ngokuthisileyo. Udid lokuqala lwesifo seswekile ayisosifo sekhaya kodwa lufuzo ngokwejinizi. Khumbula ukuba isifo seswekile usilawula ngokwakho. Ukulawula isifo seswekile kufuna indlela yokwenza nelungileyo yokuphila nesifo esingapheliyo. Nanga amanye amacebiso asuka kwiminyaka engamashumi amabalwa yokuphila nodidi lokuqala lesifo seswekile.
Udidi lwesibini lwesifo seswekile
Udidi lwesibini lwesifo seswekile lolona didi luxhaphakilkeyo lwesifo seswekile ( iipesenti ezingama-90 zinodidi lwesibini lwesifo seswekile). Lusoloko lubangelwa yindlela yokuphila: ukutya okunamafutha,iswekile, isitatshi esihlaziyiweyo kwakunye nokungazilolongi ngokwaneleyo. Kudidi lwesibini lwesifo seswekile, injeke isasebenza, kodwa umzimba uyazikhaba iihomoni kwaye awukwazi ukuzicola ngokwaneleyo.
Udidi lwesibini lwesifo seswekile, luxhaphakile ebantwini abadala. Nangona kunjalo, liyanda inani labantwana abafunyaniswa benodidi lwesibini lweswekile, amaxesha amaninzi xa bebakhulu ngokugqithisileyo okanye bengazilolongi. Abantu abanodidi lwesibini lwesifo seswekile bakhulu okanye banabantu abanesifo seswekile efemelini basemngciphekweni kwaye ngungadingeka ukuba bahlise umzimba . Nanga amacebo aluncedo oku okulawula udidi lwesibini lwesifo seswekile,kuquka amacebo okwehlisa isiqu,indlela yokulawula isixa sokutya kunye nokukhetha iindidi zokutya ezilungileyo.
Kudla ngokubakho iipilisi ezilandelwa sisitofu emva kwexeshanyana ukuba kunyanzelekile. Ngamanye amaxesha, amayeza odidi lwesibini lwesifo seswekile angakhokhelela ekuhambiseni kwesisu (isisu esiqunjelweyo), kodwa ukuba uwasela ebusuku ibayingxaki encinci le. Ukuba sifumaneke kusekutsha, udidi lwesibini lwesifo seswekile luyabuyiseleka umva ngotshintsho kwindlela yokutya kunye nokuzololonga. Kunyanzelekile ukutshintsha indlela yokuphila ukuze ukwazi ukulawula udidi lwesibini lwesifo seswekile? Ewe. Kodwa ukuba wenza njalo, ungakwazi ukuphila ubomi obude nobom ubusempilweni.
Isifo sewekile sokukukhulelwa
Isifo sewekile sokukukhulelwa sisimo sokubanezinga eliphezulu leswekile yegazi ngexesha ukhulelwe. Abafazi abanesifo seswekile sokukhulelwa basemngciphekweni omkhulu wokubanodidi lwesibini lwesifo seswekile ekuhambeni kwexesha ebomini. Njengodidi lwesibini lwesifo seswekile, ingakwazi ukulawulwa ngendlela yokutya kunye nokuzilolonga,nangona ngamanye amaxesha ingadinga ukuba usebenzise iipilisi. Ingozi ngesifo seswekile sokukhulelwa kuxa singafunyaniswanga, singalimaza umntana- kubalulekile ukuba uhlolelwe isifo seswekile sokukhuklelwa xa ukhulelwe (kakhulu ekuqaleni kwesiqingatha sesithathu sokukhulelwa).
Kukhona nolunye udidi lwesifo seswekile, esaziwa ngokuba yiLADA (Latent autoimmune diabetes) okanye udidi 1.5 lwesifo seswekile. Esi sisimo sivela xa udidi lokuqala lufunyanwe ebantwini abadala, abaqheleke bekudidi lwesibini lwesifo seswekile. Iinempawu ezifanayo nezodidi lokuqala lwesifo seswekile ngaphandle kokuba yona ifumaniseka emva kwexesha.
Unoluphi udidi lwesifo seswekile? Wawuxelelwe ngokucacileyo ngoku wawufunyaniswa unesifo seswekile?
Photo by Mark Claus on Unsplashand Dexter Chatuluka on Unsplash
[…] Yintoni udidi lokuqala nolwesibini lwesifo seswekile? Isicwangciso sendlela yokutya enesondlo Iingcali zesifo seswekile ezigqwesileyo eMzantsi Afrika Indlela yokutya esempilweni yabanesifo seswekile Free Diabetes Guidebook Free Diabetes Cookbook Do you know the 5 symptoms of diabetes? […]
[…] isifo seswekile? Yintoni udidi lokuqala nolwesibini lwesifo seswekile? Isicwangciso sendlela yokutya enesondlo Iingcali zesifo seswekile ezigqwesileyo eMzantsi Afrika […]